Isbitaal Buuxa Oo Xayiraad La Geliyey, Kaddib Dadkii Oo Uu Xanuun Ku Wadda Dhacay & Dalka Uu Ku Yaal.
Wednesday 3rd June 2020 06:15:18 in Wararkii Maanta by Madaxa Wararka
Horraantii bishii April, qof bukaan ah oo ku jiray isbitaalka St Petersburg ee dalka Ruushka ayey ku dhacday burunkiito, oo ah xanuun sanbabbada ku waxyeelleeya. Laakiin Baaritaan lagu sameeyay qofkaas ayaa sidoo kale looga helay cudurka coronavirus, kaddibna waxay dowladda karantiil galisay guud ahaan isbitaalka oo dad badan ay ka buuxeen. Dad ka badan 700 oo isugu jira xirfadlayaal caafimaad iyo bukaanno ayaa halkaas lagu go'doomiyay muddo 35 maalmood ah.
Karantiilkaasi ayaa la mid ahaa kii la geliyey markabkii dalxiiska ee "Diamond Princess", kaasoo rakaabkii saarnaa ay maalmo ku xannibnaayeen xeebaha Japan kaddib markii iyagoo safar ku jira uu soo ifbaxay Covid-19. Markabkaasi ayaa markii dambe laga helay in ka badan 700 oo kiis, waxaana cudurka coronavirus ugu geeriyooday 9 qof oo isugu jiray rakaab iyo shaqaale. Dadka intooda badan waxaa lagu karantiilay gudaha isbitaalka, taasoo sababtay inuu cudurka ku faafo isbitaalka oo dhan.
Ugu yaraan 2 ka mid ah shaqaalaha caafimaadka iyo 2 bukaan oo isbitaalka ku sugnaa ayaa cudurka u dhintay sida ay sheegeyso warbixin ka soo baxday mas'uuliyiinta isbitaalka St Petesburg, inkastoo warbixintaas oo dhammeystiran aan la shaacinin.
Warar aan la xaqiijinin ayaa waxay sheegayaan in shaqaalaha caafimaadka iyo bukaanka isbitaalka ku sugnaa ay sheekooyinkooda ku faafiyeen baraha bulshada. BBC News Russia ayaa la hadashay labo ka mid ah bukaannada isbitaalkaasi ku jiray.
Isbitaalkan oo ay maamusho xarunta qaran ee Verden wuxuu ka mid yahay kuwa ugu qadiimisan ee ku yaalla waddanka Ruushka, waxaana la aasaasay sanadkii 1906. Waxaa lagu daweeyaa dadka ay ku dhacaan cudurrada maskaxda, sanbabbada iyo lafaha.
Bukaannada isbitaalkaasi la geeyo waxaa laga soo gubiyaa dalka oo dhan. aarkood waxay sugaan bilo qaarkoodna sanooyin ayey ku qaadataa si ay ula kulmaan dhakhaatiirta takhasuska gaarka ah leh ee isbitaalka Verden ka shaqeysa. Xilliga isbitaalka uu xaqiijiyey kiiski ugu horreeyey ee coronavirus, wuxuu ku soo beegmay waqtigii dalka Ruushka lagaga dhawaaqay xayiraadaha mamnuucaya iney isbitaalkaasi booqdaan dadka ajaanibta ah balse tallaabbooyinkaasi oo dhan ma noqon kuwo joojiya faafitaanka faayraska.
"Waxay noo sheegeen qof bukaan ah inuu qufac billaabay, balse xilligaasi kiis Covid-19 ah lama xaqiijinin. Kaddib waxay nagu amreen inaan xiranno maaskarada afka iyo sanka lagu xirto si aan uga hortagno wixii dhici lahaa", ayay tiri Irina, oo ka mid ah bukaannada isbitaallada St Petersburg. "Farmashiga isbitaalka maaskara lagama helo, marka waxaan maaskaro macmal ah ka sameysannay wixii aan heli karnay", ayey tiri.
[War Hadda Soo Dhacay:-] Diyaarado Ayax Buufin Ka Bilaabaya Gobolada Bari Ee Somaliland Oo Burco Lagu Soo Bandhigay.